သင်္ကြန်ရာသီစာ စတုဒီသာ မုန့်လုံးရေပေါ် လုပ်စားကြမလား?
6 Apr 2018 . 4:54 PM
သင်္ကြန်ရာသီစာ မုန့်လုံးရေပေါ် စတုဒီသာလုပ်စားကြမလား?
သင်္ကြန်နဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်၊ မုန့်လုံးရေပေါ်နဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ခွဲမရတဲ့ အရာတွေပဲမဟုတ်လား။ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်းလည်း အပြင်လည်လည်၊မလည်လည် သင်္ကြန်ရာသီစာလေးဖြစ်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်လေးစားလိုက်ရမှကို သင်္ကြန်ရဲ့ အနှစ်သာရပြည့်ဝတယ် ခံစားရတာကိုး။ ဒီတော့ အခရာကနေပြီး မုန့်လုံးရေပေါ် ဘယ်လို အရသာရှိရှိ လုံးစားလို့ရမလဲ၊ စတုဒီသာ ကျွေးလို့ရမလဲ ဆိုတာ သတင်းစာလွှာပါးလိုက်ပြီနော့။
မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်း မများပါဘူး။ လုပ်စားလိုတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး-
(၁) ယိုးဒယားကောက်ညင်းမုန့် -(၃) ချိုး
(၂) ဆန်မှုန့် – (၁) ချိုး
(၃) ရေကြက်သီးနွေး- (၂) ချိုး
(၄) ထန်းလျက် (သို့) ကြံသကာ
(၅) အုန်းသီး ခြစ်ပြီးသား အုန်းသီးဖတ်နုနုလေးတွေ
(၇) ငရုတ်သီးစိမ်း ၄,၅ တောင့်
(၁) ပထမဦးစွာ ကောက်ညင်းမှုန့် (၃) ချိုးနဲ့ ဆန်မှုန့် (၁) ချိုးကို ရေကြက်သီးနွေး (၂) ချိုးနဲ့ ရောသမမွှေပြီး ညက်နေအောင်နယ်ပေးပါ။
(၂) ထန်းလျက် (သို့) ကြံသကာကို အနေတော်အတုံးလေးတွေ တုံးထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုလည်း အညှာချိုးထားပါ။
(၃) အပေါ်က နယ်ထားတဲ့ ဆန်မှုန့်ထဲကို ထန်းလျက်(သို့) ကြံသကာတုံးလေးတွေ၊ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေ ထည့်လုံးပေးပါ။ လက်မကပ်အောင် လက်ကို ဆီသန့်သန့်လေး ဆွတ်နယ်ပြီး လုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထန်းလျက်ကို လုံနေအောင် အစာသွပ်ဖို့ကတော့ အဓိကပါပဲ။
(၄) ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးဦးထဲကို မုန့်လုံးလေးတွေ ထည့်ပါ။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာ မုန့်လုံးလေးတွေ ရေပေါ်ဆူလာရင်တော့ ဆယ်ပြီး ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲသို့ အအေးခံထားပါ။
စားချင်စရာလေးပဲနော် ( ငရုတ်သီးလေးနဲ့ )
နောက်ဆုံးမှ အရသာရှိတဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်လေးတွေကိုအပေါ်က အုန်းသီးဖတ်နုနုလေးတွေဖြူးပြီး တလုံးပြီးတလုံးအားရပါးရစားပြီး၊ အရပ်ထဲသို့လည်း ဝေနိုင်ပါပြီ။ ကံထူးသူမောင်ရှင်ကတော့ ငရုတ်သီးလေးကိုက်ကြေးဆိုတော့ ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ အရသာလည်းရှိ၊ သင်္ကြန်ရိုးရာလေးလည်းဖြစ်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်တွေ အလှုလုပ်ရင်း၊ စားရင်း ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး အန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
သင်ျကွနျရာသီစာစတုဒီသာ မုနျ့လုံးရပေျေါ လုပျစားကွမလား?
သင်ျကွနျနဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါ၊ မုနျ့လုံးရပေျေါနဲ့ သင်ျကွနျဆိုတာ ခှဲမရတဲ့ အရာတှပေဲမဟုတျလား။ သင်ျကွနျရောကျတိုငျးလညျး အပွငျလညျလညျ၊မလညျလညျ သင်ျကွနျရာသီစာလေးဖွဈတဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါလေးစားလိုကျရမှကို သင်ျကွနျရဲ့ အနှဈသာရပွညျ့ဝတယျ ခံစားရတာကိုး။ ဒီတော့ အခရာကနပွေီး မုနျ့လုံးရပေျေါ ဘယျလို အရသာရှိရှိ လုံးစားလို့ရမလဲ၊ စတုဒီသာ ကြှေးလို့ရမလဲ ဆိုတာ သတငျးစာလှာပါးလိုကျပွီနော့။
မုနျ့လုံးရပေျေါလုံးဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေလညျး မမြားပါဘူး။ လုပျစားလိုတဲ့ပမာဏပျေါမူတညျပွီး-
(၁) ယိုးဒယားကောကျညငျးမုနျ့ -(၃) ခြိုး
(၂) ဆနျမှုနျ့ – (၁) ခြိုး
(၃) ရကွေကျသီးနှေး- (၂) ခြိုး
(၄) ထနျးလကျြ (သို့) ကွံသကာ
(၅) အုနျးသီး ခွဈပွီးသား အုနျးသီးဖတျနုနုလေးမြား။
(၇) ငရုတျသီးစိမျး ၄,၅ တောငျ့
(၁) ပထမဦးစှာ ကောကျညငျးမှုနျ့ (၃) ခြိုးနဲ့ ဆနျမှုနျ့ (၁) ခြိုးကို ရကွေကျသီးနှေး (၂) ခြိုးနဲ့ ရောသမမှပွေီး ညကျနအေောငျနယျပေးပါ။
(၂) ထနျးလကျြ (သို့) ကွံသကာကို အနတေျောအတုံးလေးတှေ တုံးထားပါ။ ငရုတျသီးစိမျးလေးတှကေိုလညျး အညှာခြိုးထားပါ။
(၃) အပျေါက နယျထားတဲ့ ဆနျမှုနျ့ထဲကို ထနျးလကျြ(သို့) ကွံသကာတုံးလေးတှေ၊ငရုတျသီးစိမျးလေးတှေ ထညျ့လုံးပေးပါ။ လကျမကပျအောငျ လကျကို ဆီသနျ့သနျ့လေး ဆှတျနယျပွီး လုံးလို့ရပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ထနျးလကျြကို လုံနအေောငျ အစာသှပျဖို့ကတော့ အဓိကပါပဲ။
(၄) ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရနှေေးဦးထဲကို မုနျ့လုံးလေးတှေ ထညျ့ပါ။ အခြိနျအနညျးငယျအကွာ မုနျ့လုံးလေးတှေ ရပေျေါဆူလာရငျတော့ ဆယျပွီး ပနျးကနျတဈခပျြထဲသို့ အအေးခံထားပါ။
စားခငျြစရာလေးပဲနျော ( ငရုတျသီးလေးနဲ့ )
နောကျဆုံးမှ အရသာရှိတဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါလေးတှကေိုအပျေါက အုနျးသီးဖတျနုနုလေးတှဖွေူးပွီး တလုံးပွီးတလုံးအားရပါးရစားပွီး၊ အရပျထဲသို့လညျး ဝနေိုငျပါပွီ။ ကံထူးသူမောငျရှငျကတော့ ငရုတျသီးလေးကိုကျကွေးဆိုတော့ ပြျောစရာလညျးကောငျး၊ အရသာလညျးရှိ၊ သင်ျကွနျရိုးရာလေးလညျးဖွဈတဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါတှေ အလှုလုပျရငျး၊ စားရငျး ဒီနှဈသင်ျကွနျကို ပြျောပြျောပါးပါး အန်တရာယျကငျးကငျးဖွတျသနျးနိုငျကွပါစေ။
အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ အမြဲလာလာထိုင်ချင်နေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်
ကျေးလက်စတိုင် အစားအစာကောင်းကောင်းတွေရနိုင်တဲ့ ဆိုင်သစ်လေး